အမေရိကန် မြန်မာ ဆက်ဆံရေး တရုတ် စိုးရိမ်ဖို့ မလိုဟု အမေရိကန် အရာရှိပြော — မြန်မာဌာန
မြန်မာ၊ တရုတ်နှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အလံများ။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Hillary Clinton ကို မြန်မာနိုင်ငံကို စေလွှတ်မယ်လို့ သမ္မတ ဘာရက် အိုဘားမားက ကြေညာလိုက်တဲ့နောက် အမေရိကန် အစိုးရ ထိပ်ပိုင်း တာဝန်ရှိသူတွေက အခုလို ပြောတာပါ။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ မြန်မာနဲ့အမေရိကန် ၂ နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်တဲ့ အစီအစဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရုတ် အစိုးရကိုလည်း တိုင်ပင် ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အမည် မဖေါ်လိုတဲ့ အမေရိကန် အစိုးရ အရာရှိ တစ်ဦးကတော့ မြန်မာ အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်တဲ့ ကိစ္စဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အရေး ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ အရေး မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဝန်းအဝိုင်းမှာ ပါဝင်လာနိုင်ရေးကို တရုတ် အစိုးရ အနေနဲ့ လိုလားသင့်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံရေး အကဲခတ်သူတွေ ကတော့ တရုတ်ရဲ့အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေ အပေါ် အမေရိကန် သြဇာ လွှမ်းမိုးလာမဲ့ အရေးကို တရုတ် အစိုးရ စိုးရိမ်မှု ကြီးမားလာတယ်လို့ ရှုမြင် သုံးသပ်နေကြပါတယ်။
We Burmese are always optimistic as current situation isapromising wind of new political change as things are moving forward, dramatically so we Burmese look this situation in positive way as DSKK even agreed to re-register her party and participate in by-election. Look at the world, everybody knows the attitude of 50 old military government, and their puppet civilian unformed government, but all are positively pushing the current government to make more changes, thus we people of Burma suffering distress for more than5decades should also have entitlement to expect some wind of reconciliation and democratic reform in our war-tern and socially-ailed country. We Burmese should also be united and support the effort of DSKK,UTS (the president, Mr. Obama, Mr. Moon and others well-wisher who want to see Burma asaleading Asian country andablooming eastern STAR again. Thanks
တရုတ္ကိုဆန္႔က်င္ရမယ္ ..တရုတ္ဟာ သူ႔ႏိုင္ငံေကာင္းစားေရးကလြဲရင္ တျခားဘယ္ႏိုင္ငံကိုမွဂရုစိုက္တတ္တဲ့သူ မဟုတ္ဘူး
Whoever tries to coorporate with Myanmar goverment, should firstly listen to the public's voice, even including Myanmar government. We don't want weapon from any other countries in order to kill Myanmar civillians as used to, likewise we don't want any action that non-benefit to Myanmar but benefit to China!!!!!!! Stop right now.